Ukuphupha ngeAluminiyam Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-Aluminium yinto yemichiza kwaye yeqela langaphambili lezinyithi zomhlaba. Kwimo yayo esulungekileyo, isinyithi asinabuntu kwaye siphendula ngokukhawuleza kwinqanaba elisikiweyo. Kwakhona inenqanaba eliphantsi lokumelana. Nangona kunjalo, oku kubaluleke kakhulu kwii-alloys. Eyona fom iyaziwayo ye-aluminium engasindi kakhulu i-aluminium foil, ephantse yalahleka nakweliphi na ikhaya.
1 Uphawu lwephupha «ialuminiyam» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ialuminiyam» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ialuminiyam» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ialuminiyam» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika uphawu lwephupha "ialuminium" njengophawu lwento ethile Ulwaneliseko olusisiseko lowaphuphi. Wanelisekile yiyo nayiphi na ipropathi, nokuba incinci kangakanani. Umphuphi ulibonile ixabiso lezinto zakhe kwaye ke wonwabile ngento ayenzileyo. Oku kunokubonakala kungabalulekanga okanye kungabalulekanga kwabanye abantu kwi el mundo ukuvuka, kodwa umntu oleleyo uyifumana imnandi imeko akuyo ngoku. Ke ngoko, umfanekiso wephupha «ialuminium» unokuba ngumqondiso wobuzaza.
Ukuba umntu obhinqileyo ubona ubucwebe obonakalisiweyo okanye izitya zealuminium ephupheni lakhe, kuya kufuneka avuke ebomini bokuvuka. IKummer kwaye uyeke ilahleko, ezinokulindeleka okanye ezingaziwayo kubo.
Ngokubanzi, i-aluminium inokuchaphazela ukulala ephupheni. Zakhono kunye nokubonisa indlela yokuziphatha ebaluleke kakhulu kulowo uphuphayo, kwaye, ke ngoko, zimise izigqibo zakhe. Nabani na obona i-aluminium foil ephupheni lakhe kufuneka abenolwazi ngomnqweno wabo wokugcina izimvo okanye amathuba kwikamva. Okwangoku, umphuphi akakwazi ukumelana nezi zinto, kodwa angathanda ukulandela ezi ngcinga kwixesha elizayo.
Uphawu lwephupha «ialuminiyam» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu "ialuminium" lunokubonisa impumelelo kwizinto eziphathekayo kwaye ubutyebi obuphakathi Iingoma. Umntu oleleyo unokukhangela phambili kwezi zinto kwihlabathi lokuvuka, kuba ziya kuza kuye kungekudala.
Kuba ialuminiyam yinto ethambileyo, inokubonisa ukuthamba okanye imvakalelo ethile, kuxhomekeke kutoliko lwengqondo ngephupha. Umphuphi kufuneka ayazi le propati kwaye ayisebenzise ekuvukeni ubomi kwiimeko ezifanelekileyo.
I-aluminium emenyezelayo okanye ifoyile yealuminium ephupheni ubukhulu becala ifuzisela ukutolikwa kwephupha Suerte kunye neziganeko ezilungileyo zobomi bekamva lomntu uphuphayo. Ukuba, kwelinye icala, i-foil ithuntu okanye inamafu ephupheni, umntu kufuneka alungiselele ukuphoxeka. Oku kunokuchaphazela amacandelo obugcisa nawabucala. Ngokunokwenzeka, iimeko ezihamba nophawu lwephupha zinika inkcazo yokuba yeyiphi indawo yobomi umfanekiso wephupha onxulumene nayo.
Ukuba ubunzima obuphantsi be-aluminium buphambili emaphupheni, ukuphupha kufanekisela umnqweno wakho wokukhanya okukhulu kubomi bokwenyani.
Uphawu lwephupha «ialuminiyam» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, uphawu lwephupha 'ialuminium' lisetyenziswa njengendawo ekubhekiswa kuyo element ngokomoya iqondwe kubomi bephupha. Umphuphi kufuneka ayifune kwaye ayidibanise ebomini bakhe.